Iza no mijery doka Banner | Martech Zone
Iza no mijery doka Banner
Talata, Jona 25, 2013 Douglas Karr
Tsy manohitra izany aho banner ads, saingy manohitra aho ny tsy fanaovana doka amin'ny banner izay manome antso mafy ho an'ny hetsika (CTA) mifanila amin'ny atiny mifandraika aseho amin'ny mpihaino mifandraika. Imbetsaka aho dia mitsidika tranokala ary mahita doka amin'ny sora-baventy izay tsy misy ifandraisany amin'ny atiny manodidina azy. A manao doka banner tsara indrindra rehefa CTA mankany amin'ny toeran-kaleha ho an'ny olona iray izay tonga teny amin'ny tranokala ary manantena ny hirotsaka lavitra.
Ny doka Banner dia niseho tamin'ny Internet tamin'ny taona 1994 ary nanomboka teo dia nampiasaina betsaka tamin'ny Internet izy ireo. Natao hisarika ny masony sy hahavariana izy ireo ka hiteraka fanentanana ho an'ireo mpitsidika mba hiditra amin'ny asany. Saingy, ny famokarana faobe sy ny fampiasa tsy ara-dalàna azy ireo dia nahatonga ny mpijery tsy hino sy tsy hamaly azy ireo. Rehefa afaka 8 taona, mbola milatsaka amin'ity dokambarotra manintona ity ve ny olona?
Ity infographic avy amin'ny Prestige Marketing, Iza no mijery doka Banner, manome fahitana vitsivitsy momba an'io fanontaniana io.
Aza mandoa vola amin'ny kopian'ny mailaka mivantana
Fandinihan'ny mpanjifa Google momba ny fikarohana amin'ny tsena sy ny fahafaham-po amin'ny tranokala